Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » GB » London » Izinsizakalo Zokuhlanza Ikhaphethi1
Ikhodi Yokuposa: SW15 4AJ
Sinikeza isiqinisekiso esigcwele semiphumela yazo zonke izinqubo zethu zokuhlanza. Uma kungenzeka ube nokuphawula ngomsebenzi wethu sizowenza mahhala lowo msebenzi. Abahlanza ukhaphethi bethu basebenza ngemishini yokuhlanza umusi esezingeni eliphakeme kakhulu. Sihlinzeka ngokukhishwa kwamanzi ashisayo (indlela enconywe kakhulu ngabakhiqizi abakhulu bakakhaphethi) kanye nokwelashwa okwakhiwe okwomile. Wonke umsebenzi wethu uza nesiqinisekiso sokwaneliseka kwamakhasimende esingu-100% noma uhlanze kabusha ukhaphethi wasekhaya. Ithimba lethu lochwepheshe eLondon lizokunikeza insiza enhle kakhulu yokukhipha amanzi ashisayo futhi lihlanzwe ukhaphethi wasekhaya ngendlela engenacala. Ochwepheshe baqala ngokuhlola phansi kwakho ukuhlola uhlobo lwendwangu, ubukhona bamabala, nezinga lokungcola. Amabala namamaki aphathwa ngaphambilini ngezixazululo zokuhlanza ezithuthukile ngaphambi kokuthi ukhaphethi wakho uhlanzwe ngomusi noma womile, kuya ngokuthi intambo yawo ibucayi kangakanani. Amaqembu ethu ahlala esebenzisa ama-overshoes avikelayo kanye namaphakethe wokubeka ngaphansi kwefenisha ukuqinisekisa ukuthi uzothola imiphumela yokuhlanza ehlukile. Ungathola eminye imininingwane ngathi nezinsizakalo zethu ngokuvakashela iwebhusayithi yethu noma nje ushayele ulayini wethu wosizo wamakhasimende ongu-24/7 ku-020 3404 5123.
Izikole eziseduzane SW15 4AJ